Maxkamad Laashay Racfaan Uu Qaatay Muwaadin Soomaali Loo Heysto Al-Shabaabnimo – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 12th February 2019 038
Maxkamadda Rafcaanka ee magaalladda Ontaariyo ee dalka Kanada ayaa shaacisay inay laashay Rafcaan uu soo qortay Maxamed Xasan Xersi oo 32-jir ah, kaasi oo horey loo xukumay xabsi 5 sanno ah.
Maxamed Xasan Xersi ayaa la sheegay inay la xiray bishii Maarso 29-dii ee sannadkii 2011-kii, xilligaasi oo ay Ciiddanka dalkaasi ka qabteen isago odoonayey inuu raaco Diyaarad duullimaadkeedu ahaa dalka Masar.
Dembi-baarayaasha Boliska dalkaasi waxay xilligaasi ku soo eedeeyeen inuu Masar kaga sii gudbo Somalia, si uu ugu biiro Dagaalamayaasha Alshabaab, waa sida hadalka loo dhigay.
Ciiddan dhar cad oo is-qariyey ayaa la sheegay inay Maxamed Xasan Xersi kala sheekeysteen Dagaalka Kooxaha Islaamiyiinta, waxayna ka duubeen cod isagoo u sheegayey inuu doonayo inuu u socdaalo Masar, oo uu kaga sii gudbin doono somalia, si uu uga mid noqdo Dagaalamayaasha Alshabaab, waa sida ay Dembi-baarayaashu Kanada sheegeen.
Garsoore ayaa waxa uu Maxamed Xasan Xersi ku xukumay xabsi 10 sanno ah, iyadoo lagu amray inusuan wax rafcaan ah qaadan karin ilaa uu soo dhamaysto kala-bar xukunka lagu riday.
Go’aanka lagu laalay Rafcaankiisa waxaa ku dhawaaqday Xeer-ilaalinta Guud ee dalka Kanada, iyadoo Maxamed Xasan Xersi uu haysto 60-maalmood oo uu rafcaankisia ugu gudbin karo Maxkamadda Sare ee dalkaasi.
Al Shabaab oo soo bandhigay gaari ciidan oo dagaal ay ku qabsadeen+Sawirro
Dhagayso:- Dadkii ku dhintay Dagaal Beleedyadii Gobalka Galgaduud oo sii kordhacaya
admin 11th June 2014 28th August 2015
Dhageyso: Wasiir Maareeye oo Bahdilaad kula kacay Dadka Danyarta ah Xili uu ku baaqay in ….